७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो थारू साहित्य सम्मेलन
आजको न्युज बुधबार, २७ चैत २०७५
रूपन्देही : थारू लेखक संघ नेपाल तथा थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) सैनामैना नगर समिति, थारू भाषा तथा संस्कृति उत्थान मञ्च रूपन्देहीको आयोजनामा भएको चौथो राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलन सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
सैनामैना उचडिहवा होमस्टेमा शुक्रबार र शनिबार भएको दुई दिने सम्मलेनले थारू भाषालाई थरूहट बहुल क्षेत्रमा कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । थरूहटका सबै जिल्लामा थारू लेखक संघको शाखा विस्तार गर्ने, प्रकाशित थारू भाषा, साहित्यकेन्द्रित पुस्तक उपर समीक्षा संस्कृतिको विकास गर्ने पनि भनिएको छ । आगामी पाँचौँ राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलन २०७५ पुसमा मोरङमा बालसाहित्य बहसमा केन्द्रित गर्ने भनिएको छ । रूपन्देहीको उचडिहवा होमस्टेलगायत विभिन्न होमस्टे क्षेत्रमा थारू संग्रहलाय निर्माण गर्न अपिल पनि गरिएको छ ।
‘थारू भाषा लेखौँ, लेखाऔँ र पढाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ चौबीसै जिल्लाका थारू साहित्यकारहरू भेला भएको कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा प्यानल छलफल गरिएको थियो । बुद्ध र थारू सम्बन्धको बारेमा विद्यावारिधि गरेका डा. गोपाल दहित र महेश चौधरीसँग सुशील चौधरीले बहस गरेका थिए । बुद्धको जन्म भएको शाक्य वंशसँग थारूहरूको धेरै इतिहास मिल्ने भएकाले थारू समुदायको सम्बन्ध बुद्धसँग निकै नजिक रहेको निष्कर्ष थियो ।
थारूलगायत मातृभाषामा आख्यान लेखन अवस्था विषयमा मुना चौधरी, नवीन विभास र डा. धनप्रसाद सुवेदीसँग भूमिका चौधरीले संवाद गरिन् । आफू थारू भाषामा जानकार भए पनि मातृभाषामा पाठक थोरै भएकाले नेपाली भाषाको आख्यानमा केन्द्रित रहेको मुना चौधरीले बताइन् । विभास र सुवेदीले स्रष्टाहरूले जुनसुकै भाषामा लेखे पनि हुने तर आफ्नो मातृभाषालाई माया मार्न नहुने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा टीकापुर घटनामा जेल बसी ४२ महिनापछि रिहा भएका नेता लक्ष्मण थारू धेरैको आकर्षणको केन्द्र बनेका थिए । थारू नेतृत्वको सवाल विषयमा बहस गर्दै उनले टीकापुर घटना राजनीतिक हो कि होइन ? भनेर सबै सहभागीहलाई हात उठाउन लगाएर राय लिएका थिए । हो भन्ने पक्षमा सबैको हात उठेपछि यस घटनलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने नभए अर्को विद्रोह हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए । सोही विषयमा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु थारूले आयोगलाई थारूहरूको मुद्दा पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको मात्र अधिकार रहेको बताए ।
डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत विजय कर्णले थारू, मधेसी, दलितहरूलाई राज्यले अझै पनि अर्कै ग्रहबाट आएको मान्छेको रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको विचार राखे ।
गैरथारू अन्वेषकका नजरमा थारू समाज र संस्कृति विषयमा डा. मुकुन्द शर्मा तथा पत्रकार चन्द्रकिशोरसँग दिलबहादुर चौधरीले बहस गरे । शर्माले खानपानलगायत विभिन्न समस्याका कारण थारूहरू आफ्नै कारणले पछि परेको राय व्यक्त गरेपछि चन्द्रकिशोरले थारू साहित्यकारहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थारूहरूकै अपमान नगर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रमको मुख्य बहस डगौरा थारू भाषाको मानकीकरणबारे थियो । चितवनीया थारू व्याकरणमा विद्यावारिधि गरेका त्रिविका अंग्रेजी प्राध्यापक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल तथा थारू भाषाको क्रियाको अवस्था विषयमा विद्यावारिधि शोधरत रामबहादुर चौधरीले डगौरा थारू भाषामा त, थ, द, धको प्रयोग नभएको बताए । थारूहरूले जस्तो बोल्छन्, त्यस्तै लेखे वैज्ञानिक हुने उनीहरूको तर्क थियो । महेश चौधरीले थारू भाषामा त, थ, द, धको प्रयोग सर्वस्वीकार्य भइसकेकाले अनावश्यक बहस जरुरी नरहेको विचार राखे ।
सो अवसरमा दिलबहादुर चौधरी, जीत ट्रासन, सीताराम चौधरी, भोलाराम चौधरी, बमबहादुर थारू, प्रल्हाद थारू, केवी चौधरी, दुर्जन चौधरी, कृष्णराज सर्वहारी, मानबहादुर पन्ना, मोतीरत्न, रामबहादुर चौधरीलगायतका दर्जन बढी थारू साहित्यकेन्द्रित पुस्तकको विमोचन गरियो । थारू कला, संस्कृतिको संरक्षणमा लागेका लेखिका शान्ति चौधरी, गायकद्वय हरिनारायण चौधरी, श्रीनिवास चौधरी तथा चलचित्रकर्मी मनीष चौधरी गरी चार जनालाई सम्मान पनि गरियो ।
पहिलो दिनको उद्घाटनको अवसरमा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका मातृभाषा साहित्य विभाग प्रमुख प्राज्ञ लक्ष्मी माली, भाषाविद् महेश चौधरी, सैनामैना नगरपालिकाका मेयर चित्रबहादुर कार्की, थारू लेखक संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णराज सर्वहारी, संघका कैलालीका अध्यक्ष सीताराम चौधरीलगायतले आआफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रम थाकस सैनामैना नगर समितिका अध्यक्ष दुलबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
सम्मेलनमा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, सैनामैना नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, प्रदेश ५ स्थित समाज कल्याण मन्त्रालयको सहकार्य रहेको थियो ।